यस्ता व्यक्तिलाई हुन्छ सबैभन्दा बढी ढाड दुख्ने समस्या, यी कुराहरु बेलैमा छाड्नुहोस ।
स्वास्थ्य : सहन नसक्ने गरी ढाड दुख्छ। हात गोडा झमझमाउने हुन्छ । धेरै समय बसेपछि उठ्न गा’ह्रो हुन्छ । कम्मर अत्या’धिक दुख्छ। शरीरको एक पाटो निर’न्तर दुखिरहन्छ । यी समस्या लिएर अस्पताल पूग्ने मानिस दिनहुँ बढ्दैछन् ।
कसैले यसलाई ब्याक पेनु भन्छन त कोही क’म्मरको दु’खाई। समग्रमा भन्दा यो मेरुद’ण्डको दुखाई हो । चि’कित्सकहरुका अनुसार ह’ड्डीहरुको नसाको कारण यस्तो समस्या हुन्छ।
मेरुद’ण्डमा ‘भर्टि’ब्रा’ भनिने ह’ड्डीहरुको समूहमा नसा हुन्छ, जसलाई ‘स्पाइ’नल कर्ड’ भनिन्छ।
त्यही स्पाइनल कर्ड ह’ड्डी दुखाइको प्रमुख कारण हो। मेरुद’ण्डका करिव ७० प्रतिशत समस्या न’शाकै कारणले हुन्छ। अझ पुरुषभन्दा महिला मेरुद’ण्डको दु’खाइबाट पी’डित छन। महिलाहरुको शारीरिक सं’रचनाका कारण मेरुद’ण्डमा धेरै समस्या हुन्छ।
कस्ता व्यक्ति हुन्छन पी’डित ? मेरुद’ण्डको कनेक्स’न शारीरिक सक्रि’यतासँग जोडिएको हुन्छ। लामो समय उभिएर काम गर्नेहरुको मेरुद’ण्ड धेरै दुख्ने गर्छ।
एकै खाले काम गर्ने किसानलगायत कारखानामा काम गर्ने कामदारलाई मेरुद’ण्डको समस्या धेरै हुन्छ। मेरुद’ण्डमा समस्या भएमा पूरै ‘स्पाइनल कोलम’ नै दुख्ने हुन्छ, जसलाई चिकित्स’कीय भाषामा नेक पेनु र ब्याक पेनु भनिन्छ।
उमेर बढ्दै गएपछि ‘हाइपो’ट्रोफी’ रोग लाग्छ। रोगकै कारण हाड र मासु बढ्न थाल्छ । र मेरुद’ण्डमा परिवर्तन देखा पर्छन् । मासु बढ्न थालेपछि नसा च्या’पिन्छ । त्यसपछि हात झमझ’माउने, लेख्न गा’ह्रो हुने, पि’साबमा समस्या हुने दुइटै खुट्टा लाटो हुने, झम’झमाउने, हिँ’ड्न गा’ह्रो हुन थाल्छ।
मेरुद’ण्डको अर्को समस्या नशा च्या’तिनु हो। हातखुट्टा दुख्ने, झमझमाउने, हिँड्न गाह्रो हुने, कम’जोर महसुस नशा च्या’पिँदा हुन्छ। यी समग्र मेरुद’ण्डको सम’स्यालाई ‘स्पाइनल स्टेनो’सिस’ भन्छौँ। मेरुद’ण्ड बिग्रदै गएपछि क्या’न्सरसम्म हुन्छ जसलाई स्पाइन क्या’न्सरु भनिन्छ।
५५ देखि ६० को उमेर समूहका यो क्या’न्सरको सम्भावना ज्यादा हुन्छ। अत्यधिक दुखाउने क्या’न्सर मध्ये एक हो मेरुद’ण्डको क्या’न्सर। यसको उप’चार महंगो उस्तै छ। किनकि, क्या’न्सर पहिचानको लागि एमआरआई, सि’टिस्क्यान जस्ता विधि अपनाउनुपर्छ।
मेरुद’ण्ड रोगको उ’पचारका लागि स्पाइन सर्जरी आफैँमा महँगो पद्धति हो। यो धेरैको पहुँचमा हुँदैन। कुनै पनि मानिसको मेरुद’ण्ड बाङ्गो भएर उपचार गर्दा तीन/चार लाख रुपियाँ सम्म लाग्छ। यति ठूलो रकम सबैले ति’र्न सक्दैनन्।
समस्या कसरी निम्तन्छ ? विभिन्न दु’र्घ’टनाले गर्दा स्पाइन इन्जु’रीको समस्या धेरै छ। दु’र्घट’नामा पर्नेहरुको हेड ट्रमा, स्पाइन इन्जु’री र अर्थो’पेडिक इन्जु’री हुन्छ। उ’पचार नपाए उनीहरु जीवनभर पी’डित भएर बस्नुपर्छ।
प्राय मानिसहरु आफ्नो दैनिकीमा ध्यान दिदैनन्। बिहान उठ्नासाथ टिभी हेरेर घरमै बस्ने गर्छन्। शरीर नि’ष्क्रय हुदाँ समेत ढाड दुख्ने समस्या हुन्छ। अफिस जादाँ सवारी साधन प्रयोग गर्ने भएकाले शरीरले व्यायाम पाउदैन्। कुर्सीमा बसेर घण्टौ काम गर्नु पर्ने भएकाले कतिपय मानिसहरु पी’डित हुन्छन्।
ढाडको ‘पो’स्चर’ नमिल्दा दुखा’ईको समस्या बढ्छ।
चुरो’ट तथा मद्य|पानले मेरुद’ण्डमा असर गर्छ। अर्को समस्या आरामदायी जीवनशैली र दैनिकीको कारण पनि मानिसहरु ढाड दुख्ने समस्याबाट पी’डित छन्। त्यसैले कम्तीमा एक घण्टा शारीरिक व्या’याम वा प’रिश्रम गर्नु अनिवार्य जस्तै हुन्छ।
उप’चारमा जति ढिलाइ हुन्छ, त्यति नै बढी समस्या हुन्छ। अझ स्पाइन समबन्धि बि’रामी अझै बढी सचेत हुन आवश्यक छ। अफिस जादाँ हिड्नु या भ¥र्याङ चढ्दा पनि धेरै फाइदा हुन्छ। अफिसमा बस्दा ढाड ९० डि’ग्रीको पोजि’सनमा राखेर काम गर्दा केही राहत मिल्छ। त्यस्तै आँखा र क’म्प्युटरको सतह बराबर हुनुपर्छ। अझ समय समयमा कुर्सीबाट उठेर जिउ तन्का’ए पनि केही राहत मिल्न सक्छ।
सडकका कारण मोटरसाइकल चलाउनेहरुलाई ढाडको समस्या देखिन्छ। सडकमा हुने खाल्डो र ग्राभेलले गर्दा मोटरसाइकल चलाउनेहरुको शरीरमा कम्पन पैदा हुन्छ। त्यसले मेरुद’ण्डमा खिइने समस्या हुन्छ। स्पाइनको समस्या दुखाइबाट नै सुरु हुन्छ। मेरुद’ण्डको इ’न्फेक्सनले दुखाइसंगै ज्वरो पनि ल्याउँछ। अत्यधिक दुख्ने भएकाले दैनिक कार्यमा अवरोध हुन्छन्।
उपचार के त ? सर्जि’कल ब्याक पेनु र ननस’र्जिकल ब्याकपेनु चिकि’त्सकिय भाषाका दुइ टर्म हुन। देखिएका ७० प्रतिशत समस्या ननस”[र्जिकलु हो। औ’षधि, फिजि’योथेरापी र जीवनशैली परिवर्तनबाटै अ’धिकांश समस्या निको हुन्छ।
नेपालमा औँलामा गन्न सकिने मात्रै स्पाइन समबन्धी विशेषज्ञ छन्। स्पाइन सर्जरीमा निकै ज’टिल हुन्छ। स्पाइन सर्जनबाट यसको उपचार गरे जोखिम निकै कम हुन्छ। यसमा प्लारालाइसिसलगायत समस्या पर्छन् । नसामा इन्जु’री भएर नचल्ने जोखिम हुन्छ। दुखाइका प्रकृ’ती हेरेर त्यस समबन्धि विशे’षज्ञकोमा गए अधि’काशं समस्या समाधान हुन्छ।
बच्ने उपाय: ढाड दुखाइको समस्या नआउँनको लागि हामीले दैनिक जीवनयापनलाई परिवर्तन गर्न सक्नु पर्छ । ढाडलाई स्वास्थ र बलियो राख्नु पर्छ । ढाड माशं’पेशीलाई थप बलियो बनाउँनु पर्छ । शरीरको तौललाई निय’न्त्रण गर्नुपर्छ । मोटोपनाले ढाँडमा थप समस्या उत्पन्न हुने भएको हुँदा मोटोपनालाई
समयमानै नियन्त्र’ण गर्नु राम्रो हुन्छ भने ध्रुम’पान गनुहुन्छ भने छोड्ने प्रयास गर्नु पर्छ । साथै सिधा उभि’दा ढाड सिधा राख्ने , धेरै समय सम्म उभिनु परेको खण्डमा खुट्टालाई तलमाथि राखि ढाडमा पर्ने भारलाई कम गर्नुपर्दछ । होसियारी साथ भारी उचाल्ने, भारी उचाल्दा समानलाई शरीरको अरुभागको पनि मद्धत लिएर उठाउँदा राम्रो हुन्छ । -इन्फोलिन्क
२०७८ बैशाख ३१, शुक्रबार १०:०६ गते 1 Minute 405 Views